NGABA UFANELE ULITSHITSHISE IKHEKHE LOMTSHATO EBUSWENI BEQABANE LAKHO? - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho Ngaba ikhekhe lomtshato eliSwilayo ebusweni beqabane lakho yinto ekufanele uyenze?
Sibona eli siko kuyo yonke indawo, kodwa ngaba iseyinto? UNaomi Wong Photography
Ukuhlaziywa ngoJan 08, 2018
Xa kufika ixesha lokusika ikeyiki kumsitho womtshato, ezinye izibini ziya kondla ngokulula, ngelixa ezinye ziya kutyumza izilayi ebusweni babanye. Kwaye ngelixa le yokugqibela ingumboniso oqhelekileyo esiwubukeleyo kwimiboniso bhanyabhanya nakwimitshato kamabonwakude iminyaka, ngaba isesisithethe esidumileyo ukuxhasa?
Ewe, ngokuqinisekileyo kubonakala ngathi sibona okuncinci kuyo kwimitshato yobomi bokwenyani, njengoko ikuyo yonke indawo njengoko inokubhalwa. Ayisiyonto eyenzelwe wonke umntu: Ngaphezu kokulindeleka, iinwele zobungcali kunye nokwenza izithambiso ngelixa unikela ngeempahla ezibizayo ngexesha lomsitho womtshato. Nokuba iindwendwe zakho ziyazikhotha iichops zazo ukuze zibone umzuzu wokuhlekisa, kuyaqondakala ukuba kutheni ufuna ukuwushiya.
Ewe, yintoni onokuyenza endaweni yokujonga onke amehlo ejonge kuwe? Yondla nje ikeyiki omnye komnye — isenzo eso sibonisa ukuzibophelela kwakho ekubonelelaneni. Iswiti, akunjalo?
Ewe kunjalo, njengayo yonke enye into, ukukhetha ukuthambisa iqabaka ebusweni beqabane lakho kuxhomekeke kuwe. Ngokucacileyo yenza iifoto ezingenangqondo-kwaye iindwendwe zakho ngokuqinisekileyo ziya kuhleka kuyo-qiniseka ukuba wena neqabane lakho niza kwisivumelwano sobabini ngaphambi kokuba isenzo sokwenziwa kwekhekhe senzeke (akukho zimanga apha). Akukho namnye kuni uya kufuna ukubanjwa angalindelanga kwaye neendwendwe zakho zinokuba lingqina lomlo wakho wokuqala wokutshata. Kwaye ube ne-napkins esandleni sakho xa ufuna ukucocwa.
Khawusixelele apha ngezantsi-ingaba wena neqabane lakho niceba ngokuthambisa ikhekhe omnye komnye?